Xulashada ugu fiican ee sheekooyinka dambiyada
Dib u eegista sheekada dambiyada
Wax walba way gubaan, by Juan Gómez-Jurado
Ku soo dhawaada gubashada kediska ah ee kulaylku sameeyay kulaylka wakhtiga ka hor, "Wax walbaa way gubaan" ee Juan Gómez-Jurado waxay u yimaadaan inay ku caburiyaan maskaxdeena xitaa mid ka mid ah dhulalkeeda dhinacyo badan leh. Sababtoo ah waxa qoraagani sameeyo waa in uu u dhiibo fikradda la wadaago dhagartiisa. Ma jiro wax u roon tan...
Shirqoolkii Jean Hanff Korelitz
Dhac tuuga dhexdeeda ah. Si kale haddii loo dhigo, ma rabo inaan sheego in Jean Hanff Korelitz uu ka xaday Joel Dicker qayb ka mid ah nuxurkiisa sheeko ee Harry Quebert kaas oo si sax ah sidoo kale u xaday qalbiyadeena. Laakin shilka mawduuca waxa uu leeyahay bartaas wacan ee isku beegka dhabta ah...
Arrinta Alaska Sanders ee uu qoray Joel Dicker
Wax yar ayaa ka haray si aan awood ugu yeelanno inaan nafteena ku milno Joel Dicker cusub. Markay taasi dhacdona waan joojin doonaa si aan uga warbixiyo wixii aan akhriyay. Laga bilaabo bilawgii, Alaska Sanders Affair waxaa naloo soo bandhigay si taxane ah. Laakiin waxaan horeyba u ognahay sida Dicker uu ugu isticmaalo dib u soo celinta sheekooyin cusub…
Argagax by James Ellroy
Qoraallada wax looga qabanayo taariikh nololeedka ama ugu yaraan qayb ka mid ah marinka adduunka ee jilayaasha markooda, ayaa ka wanaagsan in arrinta loo dhiibo qoraa-ga cusub intii loo dhiibi lahaa taariikh-nololeed caan ah. Mana jiro qof ka fiican James Ellroy inuu qoro qaybaha nolosha ee u dhexeeya nalalka qaar iyo hadh badan…
The Baby, waxaa qoray Pablo Rivero
Arrinka shabakadaha bulshada iyo godkooda ayaa laga soo maleegay aragti cusub. Maxaa yeelay, wax walba ma noqon karaan bohol ku wareegsan shabakadaha bulshada. Runtii, waxaan jeclaan lahaa inaan arko adduunkeena hadda jira oo xiran iyada oo aan la helin whatsapp xun oo lagula hadlo koox ama…
Urta dembiga ee Katarzyna Bonda
Gudaha Poland oo leh dhaleeceyn dhaxal leh oo leh dagaallo kulul ama sida saxan qabow oo horudhac ah oo ka soo baxaya Dagaalkii Labaad ee Adduunka, cod u eg kan Katarzyna Bonda (marka la barbar dhigo our). Dolores Redondo), si daran u dillaacaa. Xoogan murugo leh oo ah kuwa ku dhiirada inay isku xiraan…
Waxaan ku bilaabaynaa dhamaadka, by Chris Whitaker
Mararka qaarkood nooca madow wuxuu qaataa macnaha kaas oo xuduud u leh jiritaanka. Kiisaska la midka ah ee Víctor del Arbol, oo awood u leh qoto dheer oo qoto dheer oo ka yimaada soo-jeedinta jilayaasha. Wax la mid ah ayaa ku dhacaya qoraagan, Chris Whitacker kaas oo la yimid qodob kale oo shaki la'aan ah…
Qaamuuska xiisaha leh ee novel-ka Madow, ee uu qoray Pierre Lemaitre
Noir nooca maanta waa mid ka mid ah saldhigyada ugu xooggan suugaanta casriga ah. Sheekooyinka dembiyada ama kuwa hoos-tagga, hababka xafiisyada mugdiga ah ee xukuma bulaacadaha caanka ah, booliiska ama baarayaasha kuwaas oo ka tagaya maqaarka si ay u xalliyaan kiisaska ugu dhibka badan. Pierre Lemaitre waa mid ka mid ah kuwa...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga20 Xiga →